Injiniya wedu akasvika muSolomon Islands
Post nguva: Chivabvu-13-2020
Munguva pfupi yapfuura, mainjiniya aWalter-mutsetse wekutanga vasvika muSolomon Islands kuzotanga michina yekugadzirisa michina, kuitira kuti majenareta ese edhiziri aiswe mumabasa ezuva nezuva nekukurumidza. Ino nguva vatengi vedu vekunze vakatenga 2 mayuniti Volvo 500KW dhiziri jenareta uye 1 unit Volvo 100KW dhiziri gen ...Verenga zvimwe »
Gamuchirai vatengi veEjipitori kufekitori yedu
Nekukurumidza kukura kwekambani uye nekuenderera mberi kwehunyanzvi hweR & D tekinoroji, Yangzhou Walter Electrical Equipment Co, ltd yakaenderera mberi nekuwedzera musika wayo wepasi rese uye yakwezva kutariswa kwevatengi vazhinji vekunze. PaJune 7, 2018, chivakwa chengarava cheEjipitori ...Verenga zvimwe »
1000KVA Yuchai jenareta kuPhilippines
PaJune, 14th 2018 Isu tinotumira kunze chinuniti 1000kva jenareta kuPhilippines, ino inguva yechitatu kambani yedu kuburitsa zvinhu kuPhilippines gore rino. Kambani yedu ine vazhinji vanobatsirana muPhilippines, uye panguva ino takashanda pamwe nemuvaki wezvivakwa muManila. Aida kutenga 1000kva ...Verenga zvimwe »